PSJTV | जब धरहरा विस्फोट भयो
जब धरहरा विस्फोट भयो
शुक्रबार, ०९ असार २०७४ पिएसजे न्युज
इराकी प्रधानमन्त्री हैदर अल–अबादीले मोसुलमा रहेको ऐतिहासिक मस्जिद विस्फोट गरी ध्वस्त बनाउनु चरमपन्थी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) पराजित भएको औपचारिक घोषणा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारी सेनाले आईएसविरुद्धको कारबाहीलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएपछि जिहादी समूहले सो मस्जिदको धरहरा विस्फोट गराएर ध्वस्त बनाएको इराकी सुरक्षाफौजले बताएको छ । आईएसले भने सो मस्जिद ध्वस्त बनाएको आरोप अस्वीकार गरेको छ । उसले अमेरिकी सेनाले सो मस्जिद उडाइदिएको दाबी गरेको छ ।
करिब ८ सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक अल–नुरी मस्जिदमा भएको विस्फोटपछि क्षतिग्रस्त भएको देखिएको छ । यही मस्जिदमा आर्ईएसका कमान्डर अबु बकर–अल बग्दादी सन् २०१४ मा शरण लिएर बस्नुका साथै पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा देखिएका थिए । त्यसपछि उनी अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा देखा परेका छैनन् ।
केही दिनअघि उनी रुसी हवाई कारबाहीका क्रममा सिरियामा मारिएको बताइए पनि पछि बाँच्न सफल भएको खबर आएको थियो । ऐतिहासिक यो मस्जिदमा गराइएको विस्फोटको संसारभरिबाट निन्दा भएको छ ।
इराकमा खटिएका अमेरिकी सेनाका एक वरिष्ठ कमान्डरले भने, ‘इराकको सबैभन्दा पवित्र मानिने र मोसुलको मस्जिद आईएसले ध्वस्त बनाएको छ ।’ मेजर जनरल जोसेफ मार्टिनले भनेका छन्, ‘यो इराकी र मोसुलका जनतामाथिको अपराध हो र यो समूह किन यो बर्बर समूहको विनाश आवश्यक छ भन्ने उदाहरण हो ।’
मोसुललाई पुनः आफ्नो कब्जामा लिनका लागि खटिएको इराकी सैनिकका कमान्डरले सेना ५० मिटरको दूरीमा रहेका बेला आईएसले अर्को ऐतिहासिक अपराध गरेको टिप्पणी गरेका छन् । इराकी सेनाले सार्वजनिक गरेको सीसीटीभी फुटेजमा सो ऐतिहासिक मस्जिद ध्वस्त भएको देखाइएको छ ।
पछिल्लो रिपोर्टका अनुसार आईएसले इसाई सैनिकलाई अग्रिम रूपमा रोक्नका लागि आईएसले विस्फोट गराउन खोजे पनि स्थानीय जनताले रोक्दै आएका थिए । आईएसले अमेरिकी सेनाले नै मस्जिद ध्वस्त बनाएको आरोप लगाए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार दिएको छैन । इराकी सञ्चारमाध्यमले इराकी सेना मस्जिदमा प्रवेश गर्नका लागि नजिकै पुगेका बेला मस्जिद ध्वस्त बनाइएको र यदि सेना विस्फोटअघि नै मस्जिदमा प्रवेश गर्न सकेको भए धेरै जानकारी मिल्न सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
मोसुलमा इराकी सुरक्षाफौज, कुर्दिस लडाकु, सुन्नी अरब आदिवासी, सिया मिलिसियालगायतले अमेरिकी सेनाको नेतृत्वमा सुरु भएको आईएसको कब्जाबाट मुक्त गर्ने अभियानमा सामेल छन् । अमेरिकी सेनाले मोसुलमा युद्धका योजना निर्माण, सैनिक सल्लाहलगायतमा महŒवपूर्ण सहयोग गरिरहेको छ । गत अक्टोबरमा सुरु भएको सैनिक कारबाहीपछि इराकी सरकारले गत जनवरीमा मोसुलको पूर्वी क्षेत्र आईएसबाट स्वतन्त्र भएको दाबी गरे पनि पश्चिमी क्षेत्रमा आईएसविरुद्ध अझै कठिन संघर्ष गरिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सो क्षेत्रमा आईएसको कब्जामा झन्डै १ लाख सर्वसाधारण रहेको हुन सक्ने आशंका गर्दै आएको छ । आइतबार मात्रै सो क्षेत्रमा निर्णायक सैनिक कारबाही सुरु गरिएको बताइएको थियो । इराकी सेनाले सो क्षेत्रमा अब करिब ३ सयको हाराहारीमा आईएस लडाकु रहेको हुन सक्ने बताएको छ । गत अक्टोबरमा यो संख्या ६ हजार थियो ।
के थियो अल–नुरी मस्जिदको विशेषता ?
इराकको मोसुलमा रहेको अल–नुरी मस्जिद इराकी सरकारी सेना र आईएसबीचको संघर्षका क्रममा ध्वस्त भएको छ । इराकी सेनाले आईएसले मस्जिद र झुकेको ‘अल हब्दा’ धरहरा ध्वस्त बनाएको बताएको छ । यो मस्जिद प्राचीन सहरको खास प्रसिद्ध स्थल थियो । आईएसको जन्मको साक्षीका रूपमा रहेको यो मस्जिदलाई अमेरिकी सेनाले ध्वस्त बनाएको आईएसको आरोप छ ।
आईएस कमान्डर अबु बकर–अल बग्दादीले सन् २०१४ मा यहीबाट एक नयाँ इस्लामिक राज्य बनाउने घोषणा गरेका थिए । यो घोषणाको २ महिनापछि नै आईएस लडाकुले सहरमाथि कब्जा जमाएका थिए । यो मस्जिदको नाम तत्कालीन तुर्क शासक नुर अल–दिन महमुद जांगीको नामबाट राखिएको हो । उनी मोसुल र एलेप्पोका शासक थिए । उनले इसाईका विरुद्ध मुसलमानलाई एक बनाएर लामबद्ध बनाएका थिए । उनले मस्जिद बनाउने घोषणा आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा दुई वर्षअघि गरेका थिए । २८ वर्षको शासनमा नुल अल–दनले सन् ११७२ मा मस्जिद निर्माणको आदेश दिएका थिए । नुर अल–दिनलाई जिहादीले श्रद्धापूर्वक लिने गर्छन् किनकि उनले सियामाथि सुन्नीको वर्चस्व स्थापित गरेका थिए । यो मस्जिद भलै एक शासकको नामसँग जोडिएको छ, तर आम मानिस यसलाई झुकेको धरहराका लागि विशेष रूपमा लिने गर्थे । बेलनाकार धरहरा इँटाबाट बनेको थियो र यसको कलाकारिता इरानी शैलीबाट प्रेरित थियो ।
किन झुकेको थियो १५० फिट अग्लो धरहरा ?
जुन समयमा यसको निर्माण पूरा भएको थियो, त्यसबेला यसको उचाई १ सय ५० फिट थियो । १४औं शताब्दीमा इब्न बतुता मोसुल गएका थिए र यो त्यसबेला पनि धेरै झुकेको थियो । तब यस धरहरालाई ‘अल–हब्दा’ या कुबडा धरहराको नाम पाइसकेको थियो ।
यो धरहरा के कारणले झुकेको हो भन्ने अहिलेसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । स्थानीय परम्पराका अनुसार पैगम्बर मोहम्मदको निधनपछि उनी स्वर्ग गइरहँदा सम्मानमा झुकेको विश्वास छ । यद्यपि यो मस्जिद बन्नुअघि नै पैगम्बरको निधन भएको भन्दै यसलाई धेरैले विश्वास गर्दैनन् ।
विशेषज्ञहरूले यो धरहरा झुक्नुको कारण उत्तर–पश्चिमी तीव्र गतिको हावालाई मान्छन् । यसका साथै दक्षिणी क्षेत्रबाट यसमा सूर्यको प्रकाश पर्ने भएका कारण इँटा कमजोर भए र यसलाई जोड्नका लागि जुन प्लास्टरको प्रयोग गरिएको थियो, त्यो मुलायम थियो ।
इरान–इराक युद्धका क्रममा मस्जिदमा बम विस्फोट गराई नोक्सान पु-याइएको थियो भने त्यसमा रहेको अन्डरग्राउन्ड पाइप नष्ट भएको थियो । सन् २०१२ मा युनेस्कोले यो मस्जिद आफ्नो सिधा दूरीबाट २ दशमलव ५ मिटर झुकेको बताउँदै ढल्ने चेतावनी पनि दिएको थियो । २ जुन २०१४ मा युनेस्कोले स्थानीय सरकारको सहयोगमा यसको संरक्षण कार्यक्रम चलाएको थियो । तर त्यसलगत्तै मोसुल आईएसको कब्जामा गएपछि कार्यक्रम रोकिएको थियो ।